Gịnị bụ iTunes Playlist na Smart Playlist?
> Resource> iTunes> Gịnị bụ otu ihe iTunes Playlist na Smart Playlist?
Gịnị bụ otu ihe iTunes Playlist na Smart Playlist?
Playlist, dị ka e gosiri site 'Play + List', bụ nanị a ndepụta nke songs nke nwere ike na-egwuri otu mgbe ọzọ, sequentially ma ọ bụ shuffled. Ị pụrụ ịtụle a playlist ka gị onwe gị music chịkọtara. iTunes na-eji otu echiche nke listi ọkpụkpọ iji hazie music, ma na a elu ndị ọzọ ụzọ.
E nwere n'ezie abụọ dị iche iche nke listi ọkpụkpọ na iTunes; ya bụ na 'Playlist' na 'Smart Playlist'. Ị ga-mkpa iji aka tinye songs ma ọ bụ egwu na-eme ka elu gị onwe gị playlist, mgbe maka ikpeazụ, ọ ga na-akpaghị aka ụdị gị songs n'ime dị iche iche listi ọkpụkpọ. Ma dịgasị na ha onwe ha ụzọ na ihe zuru ezu, na-ebu na-agụ ha na ha iche iche aga n'okpuru.
Ọ bụ mfe ike a n'ozuzu playlist na iTunes. Nanị kụrụ na + ihe ịrịba ama na ala-n'akụkụ aka ekpe nke iTunes ma ọ bụ jigide 'Wụk + N' si File> New Playlist. Mgbe ahụ na-enye ya aha ọ bụla ị chọrọ. Ma ọhụrụ kere playlist bụ ka efu. Ị ga-mkpa ka ịgbakwunye songs kpọmkwem playlist mgbe ahọpụta ha na Library Music ma ọ bụ ẹdude playlist.
Iji họrọ multiple songs ozugbo, pịa na chọrọ tracks mgbe ejide ala Wụk ma ọ bụ Ctrl igodo (Mac ma ọ bụ Windows). Ekemende, ikpuru na-dobe ha n'ime playlist. A green gbakwunyere ịrịba ama na ọnụ ọgụgụ nke ahọrọ tracks ga-apụta.
Smart Playlist bụ ike na search dabeere playlist. Ọ ịrụ searches nọgidere na gị music n'ọbá akwụkwọ maka mmelite. Na-na-pụtara na ị pụrụ adịghị tinye songs ka Smart Playlist aka. iTunes na-enye gị ọnọdụ setịpụrụ dị ka ibiere maka Smart Ndetuta egwu ọkpụkpọ; gụnyere Artist, Album, Year, Song Name, (Ụbọchị) ikpeazụ Egwuru, Ụbọchị kwukwara, Genre, dere, My Rating, Play ọnụ na ihe ndị ọzọ.
Nzọụkwụ ịmepụta otu iTunes Smart Playlist yiri ọkọlọtọ playlist. Họrọ New Smart Playlist si File menu. Ndị na-esonụ window (dị ka e gosiri screenshot) ga-egosi:
Na-ebu na iji họrọ ma ọ bụ kọwaa gị ibiere. Ka ihe atụ, i nwere ike na-achọ inwe gị niile songs ota site MNa Romance. The Smart Playlist ga-ahụ na-anakọta ọhụrụ ọ bụla song site na ya na nọgidere tinye ya na playlist (ma ọ bụrụ na e nwere mba item ịgba setịpụrụ na Live emelite na-enyocha).
Iche n'etiti Playlist na Smart Playlist
iTunes Playlist na Smart Playlist na-ma song anatara, ma otú ha na-eme bụ kpam kpam dị iche iche. Ndị ọzọ karịa nke a, ha na-kpam kpam otu ihe ahụ. Ị nwere ike iji otu usoro ndabere, ibubata ma ọ bụ mbupụ ihe iTunes Ndetuta egwu ọkpụkpọ na Smart Listigwuọ.
I nwekwara ike tọghata a Smart Playlist ka a ọkọlọtọ Playlist site mbụ exporting Smart Playlist na aka importing ya jidesie iTunes ọzọ.